Madaxweyne Erdoğan Oo Ku Dhawaaqay Channel Istanbul | RayHaber | raillynews
[22 / 03 / 2020] Dhaqangelinta iyo Talaabooyinka Musalafnimadu waxay Joojisay Go'aankii Madaxweynaha!	coronavirus
[21 / 03 / 2020] 21.03.2020 Warbixinta Coronavirus	coronavirus
[21 / 03 / 2020] Miisasyada ku yaal maqaayadaha waxaa la qaadaa kaliya	GUUD
[21 / 03 / 2020] Dadka da'doodu ka weyn tahay 65 sano iyo Cudurka daba-dheeraada waa mamnuuc	GUUD
[21 / 03 / 2020] 20.02.2020/XNUMX/XNUMX coronavirus Report Turkey	GUUD
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMadaxweyne Erdogan ayaa ku dhawaaqay Channel Istanbul
06 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu bayaan ku saabsan Kanal İstanbul ka sheegay bayaannada wadajirka ah ee CNN TKRK-Kanal D. Oğ Haddii aannaan helin dhaqaale, waxaan ku samayn doonnaa miisaaniyadda qaranka, ayuu Erd Erdogan ka yidhi Mashruuca Kanal Istanbul.
Channel Istanbul, iyo afka hore ee mucaaradka markii lagu dhawaaqi doono qandaraaska hortiisa xaraashka, Erdogan wuxuu yiri waxaa jira su'aalo, açıklan Mar haddii tan la shaaciyo ama maya 'waxaan u arkaa su'aashan mid aad u xun. Dabcan waan sharxaa waxaan ula jeedo. Markaa hadda waxaan nahay Buundada Saddexaad ee xilligeenna. Kama sharixin, waan faahfaahinnay. Marmaray ayaa la dhisay. Kama sharixin, waan faahfaahinnay. Waxay ahayd Eurasia. Cusmaangazi waa la qabtay. Waxaan u sharaxnay arrimahan oo dhan. Dhab ahaan baan u sheegnay xaraashyadooda. Haatan si la mid ah ayaa sidan oo kale loogu samayn doonaa mar labaad.
Erdogan wuxuu carabka ku adkeeyay inay jiraan labo arrimood oo muhiim ah halkaan, wuxuu yiri:
Bir Midkood ayaa la qorsheeyay mar. Howlaha mashruuca ayaa sidoo kale la soo gabagabeeyey. Tani waa waxa ugu muhiimsan. Qorshe, mashruuc. Dhanka mowqifka maaliyadeed ee ganacsiga, waxaan ku sameyn karnaa tan BOT (dhisid-socodsiin-wareejin). Waxaan ku qabanaa laba miisaaniyad qaran. Rabitaankeygu waa inaan sidan ku sameeyo nidaamka BOT. Waa maxay sababta? Sababta oo ah in lacag yar ka soo baxdo maaliyaddeena Sida ku xusan heshiiska aan sameyn doonno, shirkadaha ku rarnaa waxay sidoo kale raadiyaan isha ay ka helaan kanaalkan. Qalbigeygu sidan wuu doonayaa maxaa yeelay kama tagno miisaaniyaddii qaranka. Waannu ka helnay, haddaanu heli kari waynay, waxaan ka samaynaa miisaaniyadda qaranka. Miisaaniyadda Turkigu ma waxay gasho miisaaniyadda Turkiga ee shaqadan sidoo kale? Waxaan rumeysanahay inay soo galeen garoonka diyaaradaha Istanbul. Waxaa laga yaabaa inay ka helaan deynta dibedda. Waxay kuqaadaan talaabadan sumcada ay heleen.
Erdogan wuxuu sheegay in farriin lagu tuuray jidka barnaamijka, wuxuu yiri:
Da Fariintaas, waxaan dhahayaa, nasiib xumo, waqtiga la dhisayo buundada ugu horeysa, kuma bixin doono magaca wargeyska, laakiin waad ogtahay. Halkaas ayaa laga sheegayaa 50 sano ka hor. 'Dhismaha Buundada Koowaad waa musiibada Istanbul, ayuu yidhi. Fiiri, isla maskaxdii waxay ku sameeyeen Buundada Labaad, iyaguna waxay sameeyeen saddexaad. Mid ka mid ah sababihii dib noogu dhigay si aan u dhammaystirno Marmaray waxay ahayd Rug-yaraha Architects-ka iyo Injineerada. Isagu ma uusan dirin wax shaqo wanaagsan. Marwalba wajiga istaaga. Xarunta Madaxtooyada. Hay'adda CHP wali way la tacaalaysaa. Golaha Gobolka ayaa leh go'aan. Waa dhamaatay. Wali waa 'baxsi' '
Madaxweynaha Erdogan oo Mtobobus ku qaabilay Madaxweyne Aktaş
Metro News oo ka socda Madaxweynaha Erdogan iyo Konyaanka
Madaxweynaha Erdogan oo ammaanay mashruuca Gaziray
21.03.2020 Warbixinta Coronavirus
Miisasyada ku yaal maqaayadaha waxaa la qaadaa kaliya
20.02.2020/XNUMX/XNUMX coronavirus Report Turkey
Tirada Dhimashada Wadnaha ee Talyaanigu wuxuu ahaa 793 Maanta!
Isku-habeynta Coronavirus Services Services
Wadooyin Kale oo Shaqooyin Lagu Badbaadinayo Gaadiidka Malatya
Gaadhiga Gaadhiga Cable Oo La Joojiyay Ankara Sababa la xidhiidha Virus Corana!
Tirada Basaska iyo Tareenka ayaa yareyn doona 23-ka bisha Maarso Eskişehir